OPPO Reno Ace: famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Nisy vaovao tao amin'ity telefaona ity nandritra ny herinandro maro, fa farany efa natolotra fomba ofisialy. Efa natolotra ny OPPO Reno Ace, ny telefaona vaovao ao anatin'ity sokajy marika sinoa ity. Na dia fanombohana manan-danja aza izy io, satria tonga miaraka amin'ny mamaly haingana haingana indrindra eny an-tsena. Zavatra efa nambara herinandro lasa izay miaraka amin'ity maodely ity.
Ny OPPO Reno Ace dia vaovao maodely ao anatin'ny marika farany sinoa. Fitaovana matanjaka iray, misy famaritana tsara sy fiampangana haingana izay tsy isalasalana fa ho fitsiriritan'ny maro ary mahatonga an'io orinasa io indray ho referansa amin'ity sehatra ity, izay iray amin'ireo marika manan-danja indrindra.
Ny endrik'ity finday ity dia tsy mitovy amin'ny an'ny maodely hafa amin'ity faritra ity. Hatramin'ity indray mitoraka ity dia miloka amin'ny efijery misy ny notch, miaraka amin'ny naoty somary lavalava amin'ity tranga ity. Eo ambanin'ity efijery ity dia misy ny sensor an'ny tanan-tanan'ny telefaona ary ao aoriany isika dia mahita fakan-tsary efatra ao anatiny.
Oppo Reno A, finday vaovao natomboka tany Japon niaraka tamin'ny Snapdragon 710
1 Famaritana OPPO Reno Ace
Famaritana OPPO Reno Ace
Ny telefaona dia aseho ho avo lenta, miaraka amina processeur matanjaka indrindra eny an-tsena. Ny marika sinoa dia mamela antsika ity OPPO Reno Ace ity miaraka amina telefaona mahery, izay hanome antsika fampisehoana tsara, izay miaraka amin'ny bateria tsara sy ny sarany haingana mahavariana. Na dia nandinika manokana ny sary aza izy ireo tao anatiny, noho ny fisian'ny fakantsary miverina efatra ao anatiny, ho an'ny vokatra tsara rehefa maka sary amin'ny telefaona izahay. Ireto avy ireo antsipirihany feno:
Asehoy: Super AMOLED 6,5-inch miaraka amin'ny 1080 x 2340 pixel vahaolana ary ny tahan'ny famelomana 90 Hz
Mpandrindra: Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Fitoerana anatiny: 128/256 GB (Azo aorina amin'ny alàlan'ny karatra microSD)
Fakan-tsary aoriana: telefaonina 48 MP + 13 MP misy zoom zoom x5 + zoro 8 MP + sensor sensor monochrome 2 MP
Fakan-tsary aloha: 16 MP
Batterie: 4000 mAh misy fiampangana haingana 65 W
Rafitra miasa: Android 9 Pie miaraka amin'ny Color OS 6.1
Fifandraisana: Bluetooth 5.0, Dual SIM, WiFi 802.11 a / c, headphone jack, USB-C
Ny hafa: sensor fantsom-paritra eo ambanin'ny efijery, NFC
Finday matanjaka, miaraka amina processeur sy fakan-tsary tsara. Ity OPPO Reno Ace ity dia tonga miaraka amina fakantsary miverina efatra, miaraka amina sensor 48 MP lehibe amin'ity indray mitoraka ity, miaraka amin'ny telephoto, zoro malalaka ary sensor monochrome. Fangaro mitambatra izay ahafahantsika maka sary tena tsara amin'ity finday ity. Ny fantsom-panafody, toy ny mahazatra ao amin'ny avo lenta, dia hita eo ambanin'ny efijen'ilay fitaovana.
Na dia tadidy noho ny antony hafa aza ity telefaona ity. Hatramin'ny nisafidianan'ny orinasa azy hampiasa ny rafitra famandrihana haingana haingana., 65 W Super VOOC amin'ity tranga ity. Misaotra an'ity rafitra vaovao ity, afaka manafatra ny bateria 4.000 mAh isika ao anatin'ny 30 minitra. Izay hamela io OPPO Reno Ace io hanararaotra betsaka. Tao anatin'ny dimy minitra dia afaka manafatra ny bateria 25% ihany koa isika. Rafitra izay tsy misy marika hafa ankehitriny.
Ity OPPO Reno Ace ity dia natolotra any Shina, izay no voalohany sy hatreto ny tsena tokana nanamafisana ny fandefasana azy. Na dia azonay antoka aza fa hanana fanombohana iraisam-pirenena ihany koa ity fitaovana vaovao ity, saingy mila miandry ela kokoa isika mandra-pahafantatra zavatra bebe kokoa momba an'io. Ny orinasa mihitsy dia mety hanamafy bebe kokoa momba ny fanombohana.
Ny fitaovana dia natomboka tamin'ny loko roa samy hafa, izay alokaloka volomparasy (Psychedelic Purple) ary iray hafa manga (Starry Blue). Ny vidin'ireo kinova telo amin'ity OPPO Reno Ace any Shina ity dia efa voamarina, izay manampy anay hanana hevitra momba ity maodelin'ny marika sinoa ity:
Ny kinova miaraka amin'ny 8/128 GB dia natomboka tamin'ny vidiny 3.199 yuan (410 euro amin'ny fanovana)
Ilay maodely misy 8/256 GB dia mitentina 3399 yuan (435 euro amin'ny fanovana)
Ny kinova miaraka amin'ny 12/256 GB dia natomboka tamin'ny 3799 yuan (eo amin'ny 485 euro eo ho eo no miova)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » OPPO Reno Ace: Ny finday misy fiambenana haingana indrindra eto amin'izao tontolo izao
Ny Nubia Red Magic 3S dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Eropa